सवल राष्ट्र, सुखी जनता र सफा वातावरण नेपाली युवाहरुकाे चाहना : समन श्रेष्ठ – Himalaya TV
Home » अन्तरवार्ता » सवल राष्ट्र, सुखी जनता र सफा वातावरण नेपाली युवाहरुकाे चाहना : समन श्रेष्ठ
बुहुचर्चित भारतीय टेलिभिजन रियालिटी शो एमटिभी रोडिजको नेपाली संस्करण हिमालय रोडिजका प्रथम सिजनका विजेता समन श्रेष्ठ एक रक क्लाइम्बर हुन । अब साहासिक, चुनौतिपूर्ण र जोखिमयुक्त क्लाइम्बर हुनु मात्र उनको परिचय होइन । पहिलो हिमालय रोडिजको उपाधी जितेका उनीमा प्रखर बौद्धिकता पनि छ । प्रस्तुत छ हिमालय टिभि डटकमका लागि झरना राईले उहाँसंग गरेको कुराकानी —
तपाई खासमा के हो ?
खासमा म एक मानव हुँ जो हर समयमा जीउन खोज्छ ।
हिमालय रोडिजले तपाइमा के परिर्वतन ल्यायो ?
रोडिजले मलाई एउटा अनुहार दिएको छ र नाम पनि । जसलाई मैले विगत केही वर्ष अघिदेखि चिनाउन खोजिरहेको थिएँ । यो कार्यक्रमको जित पश्चात् मलाई युवाहरूले एउटा ”रोल मोडल”को रुपमा लिएको पाएको छु ।
त्यस्तो के थियो जसले तपाइलाई फाइनलमा पुर्यायो ?
फाइनलमा पुग्नुको कारण मलाई लाग्छ धैर्यता, साहस र म प्रति मानिसहरुको माया । सिधा कुरा, अनि चाहिने कुरा गर्थें, नाटकलाई पर नै राख्थें ।
तपाइले यो उपलब्धीलाई आफ्नो जीवनमा कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ ?
यस उपलब्धीलाई म एउटा सुनौलो अवसरको रुपमा लिंदैछु । जसमा युवाहरूको सक्रियता र संलग्नताको बारेमा चर्चा गर्दै कसरी नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी युवाले देश हाँक्न सकिन्छ भन्नेतिर जोड दिन चाहन्छु । मुख्य गरी नेपालमा भएको भौतिक र प्राकृतिक संरचनालाई पूर्णरुपमा परिचालन गरी एडभेन्चर र आउटडोरलाई विकास गर्न खोज्दैछु ।
लाखै युवालाई के सुझाव दिनुु हुन्छ ?
मेरो सुझाव भनेको पहिले आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, आफूलाई के मन पर्छ थाहा पाउनुहोस् र त्यसमा शतप्रतिशत समय दिनुहोस् । सफलताले आफैं पछ्याउँछ । पहिले आफू खुशी हुनुहोस् । म सँधै तपाइँहरूलाई हौसला दिन तत्पर छु र मैले सक्दो तपाइँहरूलाई मद्दत गर्छु ।
अब देश र समाजप्रति तपाइको जिम्मेवारी के हो ?
म यो देशको एक युवा हुँ । म जस्तै थुप्रै युवाहरूको पनि एउटै चाहना र जिम्मेवारी छ । त्यो हो एक सवल राष्ट्र, सुखी जनता र सफा वातावरण । स–साना कार्यहरू होलान् तर म आउँदो पिंढी तथा देशलाई सकारात्मक सोचका साथै प्रेरणा दिइरहनेछु ।
रोडिजको यात्रामा भेटिएका त्यस्ता अविस्मरणीय कुनै घटना ?
अविस्मरणीय फ्यान र घटना जसले मलाई प्रेरणाको रुपमा लिई क्लाइम्बिङ्ग शुरु गर्नुभयो, शारीरिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुभयो, जसले मेरो तस्वीर आफ्नो मसीमा उतार्नुभयो ।
नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
नेपाली राजनीतिलाई अब युवाहरुले डोर्याउनु पर्छ । हामीले राम्रो काम गर्नेहरूलाई साथ र हात दिनु पर्छ ।
तपाइको नजरमा अब देशलाई कसले हाक्नु पर्छ ?
मेरो नजरमा अब देशलाई बौद्धिक मानिसको संरक्षणमा युवा पिंढीहरूले हाँक्नु पर्दछ । देश हाँक्नको लागि राजनीतिमा संलग्न नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो समाज, आफ्नो टोल छरछिमेकबाट शुरुवात गर्न सकिन्छ ।